Ilaa hadda, waxaan si kooban dib loo eego qaab dhismeedka guud ee baadi sahan, kuwaas oo laftiisa waa mawduuca of daaweyn dhererka buugga (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Inkastoo qaab this waa dhamaystiran, waxaa guud ahaan sababa cilmi inuu ka tago baxay qodob muhiim ah: qarashka. Inkastoo qiimaha-taas oo la qiyaasi karin, by mid waqti ama lacag-waa dhif si cad looga hadlay cilmi tacliimeed, waa caqabadda dhab ah in aan iska indha at our biimayno. Dhab ahaantii, ka-baarka wareysi cilmi sababta dadka halkii ay dadka oo dhan waa si loo badbaadiyo lacag. Sidaas darteed, qiimaha waa aasaaska loo habka cilmi baadhitaan (Groves 2004) . A kaliyeeli hal-ku fikiray inuu yareeyo baadi halka kharashka gabi ahaanba iska indha ma aha had iyo jeer in danta ugu wanaagsan.
Xuduudda ay jaceeylka la yareeyo baadi waxaa lagu muujiyey by waxbarasho durkin ee Scott Keeter iyo saaxiibadeen (2000) oo ku saabsan saamaynta howlgalka ku qaali ah si loo yareeyo aan jawaab in sahan telefoon. Keeter iyo asxaabtii orday laba sahan isku mar, mid la isticmaalayo nidaamka "Standard" oo ka mid ah iyadoo la isticmaalayo nidaamka "adag". Inkastoo nidaamka "adag" sameeyey soo saaro heerka hoose ee non-jawaab, qiyaasaha labada baarka asal ahaan waxay ahaayeen isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, hannaanka "adag" lacag qiyaastii labo jeer sida ugu badan oo qaaday 8 jeer inta. waxaan ka khayr off iyadoo 2 sahan macquul ah ama 1 sahan sanayd? Maxaa ku saabsan 10 sahan oo macquul ah ama 1 sahan sanayd? Maxaa ku saabsan 100 sahan macquul ah ama 1 sahan sanayd? Halkaa marka ay marayso qaar ka mid ah faa'iidooyinka kharashka waa in miisaan caddayn, walaac non-gaar ah oo ku saabsan tayada.
Qaar badan oo ka mid ah fursadaha abuuray by da'da digital ma aha oo ku saabsan abuurista qiyaasaha si cad leeyihiin baadi hoose. Saas ma aha, fursadahan oo ku saabsan abuurista qiyaasaha jaban oo dhakhso yihiin, laakiin waxaa laga yaabaa iyada oo qalad in haatan sare ama adag tahay in la cabbiro. Sida in badan oo tusaalooyin ah ee cutubkan ku tusi doonaa, cilmi-baarayaasha ku adkaysanayaan on a jaceeylka hal maskax la yaraynayo baadi kharash ku dhinacyada kale ee tayada la doonayo in ka maqnaan doona fursadaha xiiso leh. Marka la eego asalka this ku saabsan guud ahaan qaabka baadi sahanka, waxaan hadda ku soo jeedin doonaa in saddex qaybood oo muhiim ah marxalad saddexaad ee cilmi baadhitaan: habab cusub oo ay wakiil (Qaybta 3.4), habab cusub oo ay ku Cabbiraad (Qaybta 3.5), iyo xeeladaha cusub ee isku sahan la raad digital (Qaybta 3.6).